मौसम परिवर्तनको स्वास्थ्य प्रभावलाई सम्बोधन गर्नु किन जरुरी छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
हालसालै मौसम, आँधीबेहरी वा बवंडर जस्तो मौसमविज्ञानी घटनाहरू बढ्दो चरम भएका छन्। विश्वव्यापी औसत तापमान बढ्दै जाँदा, हामी सबै जो यस ग्रहमा बाँचिरहेका छौं हामीले बाँच्नको लागि सकेसम्म उत्तम अनुकूल बनाउनु पर्छ। तर यदि कुनै समस्या छ कि गम्भीर समस्याहरु छ, त्यो मानव हो।
यसले विश्वको प्रत्येक कुनालाई जितेको छ; यद्यपि एक अध्ययनका अनुसार मौसम परिवर्तनको स्वास्थ्य प्रभाव लाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छअन्यथा परिणाम घातक हुन सक्छ।
खडेरी वा तातो लहर जस्ता चरम घटनाको अनुभवले तपाईंको स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ, दुबै शारीरिक र मानसिक, विशेष गरी यदि तपाईंले छोटो र लामो अवधिमा व्यक्तिगत क्षति भोग्नु भयो भने। यसैले मानव स्वास्थ्यमा चरम घटनाहरूको प्रभाव जाँच गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, वायु र अपशिष्ट व्यवस्थापन संघको जर्नल मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार।
नर्थ क्यारोलिना इन्स्टिच्युट फर हाइमेट स्ट्डीजका डा। जेसी बेलले भने एक प्रकोप प्रतिक्रिया तयारी र धेरै जटिल तरीकाहरू बुझ्न जुन अत्यधिक मौसम घटनाहरूले स्वास्थ्यलाई असर पार्दछ आवश्यक छ। थप रूपमा, स्वास्थ्य केन्द्रहरूले चरम घटना भएको खण्डमा स्टाफ र बिरामीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न स्थानीय पूर्वाधारमा कमजोरीहरूको छानबिन गर्नै पर्छ, उदाहरणका लागि त्यहाँ अस्पतालहरू छन् जुन आँधीबेहरीको खतरामा पर्ने इलाकाहरूमा छन्।
मौसम परिवर्तन हुने बित्तिकै ऐतिहासिक मानदण्डहरू चरम मौसम घटनाहरू र सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामहरू बीचको सम्बन्ध बुझ्नको लागि पर्याप्त हुँदैन। यस कारणले क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनःसंरचना गर्नका साथै पीडितहरू र विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन संस्था, सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयित कार्यक्रमको आवश्यक पर्दछ।
अधिक जानकारीको लागि, गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » मौसम परिवर्तनको स्वास्थ्य प्रभावलाई सम्बोधन गर्नु किन जरुरी छ?